काठबाट बनाउँछन् यस्ता आकर्षक सामग्री, चिया पिउने एउटै कपको मूल्य २ लाख ? (भिडियो) – Sanjal Nepal
Homeबिज्ञान प्रबिधिकाठबाट बनाउँछन् यस्ता आकर्षक सामग्री, चिया पिउने एउटै कपको मूल्य २ लाख ? (भिडियो)
December 28, 2020 admin बिज्ञान प्रबिधि 913
सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाँउपालिका १ का होम बहादुर सुनार काठबाट विभिन्न आकर्षक सामाग्रीहरु बनाउछन । उनले काठबाट चिया खाने कप, दहि तथा रक्सी हाल्ने भाडो लगायत विभिन्न किसिमका आकर्षक सामाग्री बनाउछन । उनले यो व्यवसाय आप्mनै घरमा घरेलु उद्योगको रुपमा सुरु गरेका छन । सुनारका अनुसार यो व्यवसाय विगत १ वर्षदेख गर्दै आएका छन ।
उनि पैसा कमाउनकै लागी वैदेसिक रोजगारीमा पनि गए । त्यहाँ वर्षौसम्म दुख गरे पनि सोचेजस्तो कमाइ नभएपछि नेपाल फर्किए । के गर्ने भन्ने अन्यौलताका विच सुरु गरेको यो व्यवसायले उनि आफै स्वरोजगार बनेका छन भने परिवारसँगै बसेर विदेशमा भन्दा राम्रो कमाइ पनि गरीरहेका छन । बाकी कुराकानी हेर्नुहोस भिडियोमा:
April 12, 2021 admin बिज्ञान प्रबिधि 1148
August 2, 2020 Administer बिज्ञान प्रबिधि, भिडियो, मनोरंजन, समाचार 101496
August 2, 2020 Administer बिज्ञान प्रबिधि, स्वास्थ्य /जिबनशैली 21177
LEX 18 agenda conversation: Job club (541127)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511650)
Hello world! (433315)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (395874)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (104028)